गुडिरहेको बाईकमाथि बिजुलीको तार खस्दा युवक गम्भिर घाईते – BIG FM 101.2 MHz
Home » स्थानीय » गुडिरहेको बाईकमाथि बिजुलीको तार खस्दा युवक गम्भिर घाईते
गुडिरहेको बाईकमाथि बिजुलीको तार खस्दा युवक गम्भिर घाईते
पोखरा, २६ साउन / पोखरामा गुड्दै गरेको मोटरसाइल माथि बिजुलीको तार खस्दा एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ११ रानीपौवामा गुड्दै गरेको मोटरसाइकल माथि बिजुलीको तार खसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
दुर्घटनामा परि ग ६ प ८१२८ नम्बरको मोटरसाइलमा सवार पोखरा १७ बस्ने विष्णु बस्ताकोटी घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । करेन्ट लागे पछि उनको शरिरमा आगो बलेको थियो । उनले मणिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । शरिरमा नराम्ररी पोलेको छ । करेन्ट प्रवाहपछि बेहोस भएका उनलाई नजिकै रहेका स्थानीय र पैदलयात्रुले उद्धार गरी अस्पताल पठाएका थिए ।
उनको बेहोसी अवस्थामा उपचार भईरहेको छ । कतिसम्म लापरबाही छ नागरिकको ज्यानमाथि ? भनेर सरोकारवालासँग नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।
पोखराकै व्यस्त सडक रानीपौवा । अविरल पानी परिरहेको दिन । बाटोमा बाईक चलाईरहँदा एक्कासी करेन्ट प्रवाह भईरहेको तार माथि खस्छ अनि यसरी आगो बल्छ । विद्युत प्राधिकरण र सरोकारवालाको कतिसम्मको लापरबाही हो ? नजिकै अरु बस पनि छन् । बाईकमा एक जना त्यो पनि सक्ने ठाउँमा भएर पो तत्काल उद्धार भएको छ । यात्रुको भिडभाड भएको बसभित्र यसरी करेन्ट लागेको भए ठाउँको ठाउँ कतिले ज्यान गुमाउँथे ? आफ्नो ज्यान पर्वाह नगरी ज्यान जोगाउने सबै-सबैप्रति नतमस्तक । महानगरपालिका, विद्युत प्राधिकरण, सरकार सबैको ध्यान पुगोस् । खानेपानीका लागि सडक मनलाग्दी खनिन्छ । टेलिफोन तार र विजुली पोलमा करेन्टका तारहरु यसरी लथालिंग छ ।भिडियो: Sarcasm Pokhara